Reference Number: AA-00212 Last Updated: 2022-06-29 17:500Rating/ Voters
(E) Team Total Odd/Even - If team score is zero then bets will be void.
(viii) Money Line
(ix) Run Line/Alternative Handicap
(A) Subject to4½ innings rule EXCEPT where the game total has already gone over, (if game total has already gone over the quoted total, then bets on the over will be settled as winners, with bets on the under settled as losers) or where the natural conclusion of the game would have meant the outcome of the total quoted would be determined, e.g. MLB game is called, or suspended at 5-5, bets on Over 10 or 10.5 would be settled as winners, with bets on Under 10 or 10.5 being settled as losers, since any natural conclusion to the match would have at least 11 runs. Specifically, for MLB Spring Training matches settlement will be based on9innings only, in instances when the natural conclusion rule could apply.
(B) Total Runs-8.5 innings rule applies
(A) စုစုပေါင်းထောင့်ကန်ဘောအရေအတွက် ရလဒ်သည် ပွဲစဥ်တစ်ပွဲတွင် အိမ်ရှင်အသင်းကိုဖြစ်စေ၊ အဝေးအသင်းကိုဖြစ်စေ သို့မဟုတ် အိမ်ရှင်အသင်းနှင့်အဝေးအသင်းနှစ်သင်းစလုံးကိုဖြစ်စေ ပေးအပ်သည့် စုစုပေါင်းထောင့်ကန်ဘောအရေအတွက်ကိုဆိုလိုသည်။ (အကယ်၍ ဟန်းဒီးကပ်(အကျောပေး)စျေးကွက်ရှိခဲ့လျင် ၎င်းစျေးကွက်လည်းပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။ )
(B) ပြန်လည်ကန်သည့်ထောင့်ကန်ဘောကို ထောင့်ကန်ဘောတစ်လုံးအဖြင့်ရေတွက်မည်ဖြစ်သည်။
(C) ထောင့်ကန်ဘောရရှိပြီး မကန်ဖြစ်လိုက်ရလျှင် ထည့်သွင်းရေတွက်မည်မဟုတ်ပါ။
(D) စောင့်ဆိုင်းအခြေအနေတွင်ရှိနေသည့် အာရှဟန်းဒီးကပ် (အကျောပေး) နှင့် ဂိုးပေါ်/ဂိုးအောက် စျေးကွက်တွင်လောင်းထားသည့် စုစုပေါင်းထောင့်ကန်ဘောအလောင်းအစားများအားလုံးသည် အောက်ပါအခြအနေတစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့လျှင်ပြန်လည်ပယ်ဖျက်မည်ဖြစ်သည်။
(i) ဂိုးရရှိသွားလျှင် သို့မဟုတ်